Sii Hada - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Sii Hadda
Waxaan aaminsanahay inaan taageerno soogalootiga iyo qaxootiga soo koraya ee koone kasta oo Colorado ka mid ah.
Waxaan u shaqeyneynaa si hagar la'aan ah si aan u ilaalino nabadgelyada iyo sharafta bulshadayada iyada oo loo marayo u doodista, sharci dejinta, waxbarashada iyo ka qeyb qaadashada bulshada. Cimiladan arxan darada ah ee ka soo horjeedka soo galootiga, waxaan u baahanahay taageeradiina. Maalgashada shaqadeena si soogalootigayaga, qaxootiga iyo magangalyo-doonka bulshooyinku ay usii wadan karaan maalgalintooda nalada Colorado.
Sii tabarucaada awood aad ku taageerto shaqadeena mustaqbalka fog:
Noqo deeq bixiye bille ah!
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado waa urur 501 (c) (3). Deeqaha waa laga goyn karaa ilaa inta sharcigu oggol yahay. EIN: 73-1675486.
Baro sida shaqadeenu u saamayso bulshada soogalootiga ah
Meelaha ugu badan ee diiradda la saarayo ee CIRC waxay u oggolaaneysaa hay'adda inay taageerto lana shaqeyso xubnaha bulshada ee leh baahiyo iyo duruufo kala duwan. Tusaale ahaan, tixgeli jadwalka soo socda ee mala-awaalka ah ee nolosha “Elena”:
Afar iyo toban bilood jir ...
Qoyska Elena waxay keeneen Mareykanka. CIRC waxay ka caawisaa qoyskeeda helitaanka ilaha iyo taageerada si ay u dejiyaan.
Sideed iyo toban jir ...
Elena waxay go'aansatay inay codsato DACA. Qeybta adeegyada sharciga ee CIRC waxay lashaqeysaa qareenada deegaanka si ay uqabtaan aqoon isweydaarsi codsi ah ayna ku taageeraan inta howsha socoto.
Kow iyo labaatan jir ...
Elena waxay heshay shatigeeda! Waxay awood u leedahay inay tan sameyso sababtoo ah, mahadsanidiin CIRC iyo isbahaysiga iDrive ee abaabulka iyo shaqada siyaasada, DMV ee magaalada Elena waxay bilaabeysaa inay bixiso liisanka darawalnimada muhaajiriinta aan sharciyeysnayn iyo kuwa qaata DACA iyadoo loo marayo barnaamijka SB-251.
Shan iyo labaatan sano jir ...
Elena waa u ololeeye bulsho jecel. Waxay wuxuu aasaasey urur taakuleeya hooyooyinka kaligood waddanka u soo guurey. Ururka Elena wuxuu xubin ka noqdaa Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado, tababbarka isbahaysiga ee ku saabsan isgaarsiinta saxaafadda iyo lacag uruurinta waxay ka caawisaa ururka Elena inuu dhiso awooddiisa.
Sanadihii oo dhan ...
In kasta oo horumarka la sameynayo, marka Elena ay carruur leedahay xitaa waxay la halgamayaan wajahayaan naceyb ka soo horjeedka soogalootiga iyo dareemid soo dhaweyn la'aan. Ururkeedu wuxuu kaqeyb qaataa CIRC isbahaysi iyo iskaashi dhisidda dadaallada gobolka oo dhan si loo beddelo sheekada caanka ah ee soogalootiga sannadaha soo socda!